Ahoana no ahamorona ny masonao sy hahazoanao ny mety indrindra tratrany raha manao solomaso | Bezzia
Tony Torres | 04/09/2021 20:00 | Maquillaje
Ny fametrahana ny masonao raha manao solomaso ianao dia mety hahasosotra kely raha tsy hainao ny manao azy. Ny solomaso dia mahatonga ny masonao ho kely kokoa ary tsy mamela asa tsara aloky ny mankasitraka tsara. SAINGY Ny manao solomaso dia tsy mitovy amin'ny hoe tsy afaka manao makiazyMifanohitra amin'izany, amin'ny hafetsena sasany dia hampamirapiratra ny masonao ianao ary hampiseho ny masonao amin'ny hakantony rehetra.
Raha ny marina, ny solomaso dia famenon-javatra iray hafa izay raha hainao ny manararaotra azy dia afaka mankafy amin'ny iray hafa amin'ny kojakojanao ianao. Milalaova amin'ny endrika sy loko ary mahazo fitambarana solomaso. Satria raha tsy maintsy mitondra azy ireo ianao, maninona raha manana maodely maro samihafa. Raha ny amboary ny maso raha manao solomaso ianao dia ny fanomanana ny maso no tena fikafika.
1 Fetsy mamorona ny masonao raha manao solomaso ianao
1.1 Volomaso sy volomaso
Fetsy mamorona ny masonao raha manao solomaso ianao
Betsaka ny fikafika izay zarain'ny mpanakanto makiazy matihanina rehetra, rehefa manao solomaso ianao, tena zava-dehibe ny fiasan'ilay fanafenana hanafenana ny aloka noforonin'ny solomaso. Noho izany, alohan'ny hametrahana alokaloka na vokatra miloko amin'ny maso, ilaina ny miasa tsara amin'ny manafina mba hanomanana ny maso. Ny fahazoana feo miray dia ny lakileny, saingy tsy tafiditra ao anatin'ny lesoka amin'ny vokatra be loatra.
Ny tsipika misy eo amin'ny vokatra tsara sy ny tsy azo ekena dia ny habetsaky ny vokatra ampiasaina. Ho fanampin'ilay teknika ampiasaina ho azy. Ao amin'ny faritry ny faribolana maizimaizina dia tsy tokony ho tafiditra ao anatin'ny fakam-panahy hanao tafahoatra ianao satria hanampy tsy ho azo ihodivirana ny taona. Amin'ny tendron'ny rantsan-tananao dia azonao apetaka amin'ny takelaka tanteraka ilay takona amin'ny hafanan'ny vatana dia hahazoanao mampifangaro tanteraka.
Tsy ilaina ny manisy tombo-kase amin'ny vovoka, ny mifanohitra amin'izay, ny zavatra tokana azonao dia ny aforeto izay ho hitan'ny masomaso kokoa. Ilay mpanazava no mpiara-dia aminao lehibe hafa, nanomboka fikasihana kely vitsivitsy amin'ity vokatra ity dia mahatonga ny maso hisokatra misimisy kokoa ary ny endrika mifoha kokoa.
Volomaso sy volomaso
Ny fanaovana solomaso dia tsy fanelingelenana amin'ny fanaovana makiazy miasa be na maso setroka, na izany aza amin'ireny tranga ireny dia tokony hiasa tsara amin'ny borosy ianao ka ny valiny dia ankasitrahana tsara amin'ny solomaso. Na izany aza, mba hahazoana tombony betsaka amin'ny makiazy maso rehefa manao solomaso ianao dia tsara kokoa ny misafidy loko tsy miandany ary tsy dia niasa firy.
Ny aloka misy loko miboridana ampiharina amin'ny hodi-maso iray manontolo no safidy tsara indrindra isan'andro isan'andro. Mampiasà alokaloka volontany ary borosy beveled hamoronana tsipika tsara hamaritana tsara ny maso. Raha manampy tsipika beige ao anaty tsipika rano ianao dia hanampy amin'ny fanasongadinana ny fotsifotsy ny masonao ary ho toy ny fikasihan-tànana farany, paompy fanilo iray ao anaty ranomaso.
Ankehitriny, mametraka makiazy eo amin'ny masonao raha manao solomaso ianao, na ahoana na ahoanamascara tsara sy asa volo madio. Ny vera dia manarona ampahany lehibe amin'ny tavanao ary noho izany dia afaka manampy ny tenanao amin'ny makiazy hitrandrahana ny tsara indrindra amin'ny tavanao ianao. Ny maso dia ampahany lehibe amin'ny tarehy ary miaraka amin'ny makiazy tsara dia azonao atao tsara ny maneho hevitra.
Aza adino ny mametaka tsara ny volomaso, asio loko miaraka amin'ny vokatra mitovy endrika amin'ny volonao voajanahary ary amboary amin'ny gel volomaso manokana. Mikasika ny volomaso, izy ireo no lakilen'ny famaranana maso, indrindra raha solomaso ianao. Na izany aza, aza asiana misaron-tava loatra ilay sarontava na avelao ireo clumps hametraka ny fehinao amin'ny vongam-bato.
Makà borosy ho an'ny volomaso sy volomaso izay ahafahanao manampy amin'ny fanavahana ny kapoka eo anelanelan'ny soson'ny mascara. Raha te-hahazo volomaso mijanona fo izay toa tonga lafatra amin'ny solomaso ianao, andramo ity fikafika ity. Asio mascara manify manify amin'ny volon'ny volomaso aloha. Alohan'ny main-tany tanteraka, asio palitao faharoa fa hatrany afovoan'ny maso hatrany amin'ny zorony. Amin'ity fomba ity dia hahazo maso misokatra kokoa ianao izay ho tsara tarehy sy tonga lafatra amin'ny solomaso.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Maquillaje » Ahoana ny fomba hamoronana ny masonao ary hahazoana ny mety indrindra raha manao solomaso ianao
Impiry manova ny fanazaran-tena amin'ny fanatsarana ny vokatra